Duulimaadyada Madaarka Sheremetyevo ee Moscow ee Qatar Airways hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Madaarka Sheremetyevo ee Moscow ee Qatar Airways hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada Madaarka Sheremetyevo ee Moscow ee Qatar Airways hadda.
Shabakadda Qatar Airways ee sii kordheysa, shirkaddu waxay ku siin kartaa rakaabka Sheremetyevo isku xirnaanta aan kala go 'lahayn ee meelaha caanka ah ee Aasiya, Afrika, Bariga Dhexe iyo Ameerika, iyo meelaha ugu sarreeya ee qorraxda sida Maldives, Seychelles iyo Zanzibar iyada oo loo sii marayo 'Garoonka Diyaaradaha ugu Fiican Adduunka 2021', Hamad International Airport (HIA).
Diyaaradda Qatar Airways ayaa adeegeeda Moscow ka rartay garoonka Domodedovo una wareejisay garoonka caalamiga ah ee Sheremetyevo.
U dhaqaaqista Gegida Diyaaradaha ee Sheremetyevo waxa ay arkaysaa markii ugu horaysay ee Qatar Airways QSuite ee wadada.
Qatar Airways ayaa sii wada dib u dhiska shabakadeeda, taasoo hadda taagan in ka badan 140 goobood.
Duulimaadkii ugu horeeyay Qatar Airways ee Sheremetyevo International Airport (SVO) ayaa soo xirtay Oktoobar 31, 2021 Gegida dayuuradaha ee Sheremetyevo (SVO) oo hadda waxay ku shaqaynaysaa abaal-marinteeda badan ee Qsuite ee ku jirta Heerka Ganacsiga ee waddada.
QSuite waa sariirta labanlaabka ah ee warshadaha ee ugu horeysay abid ee Heerka Ganacsiga, oo leh muraayado gaar ah oo fogeeya, u oggolaanaya rakaabka kuraasta ku dhow inay abuuraan qolkooda gaarka ah, oo ah kii ugu horreeyay noociisa ah ee warshadaha.
Qatar Airways Madaxa fulinta kooxda, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: "Iyada oo Qsuite uu ku soo bilowday jidkeena Moscow, rakaabku waxay sugi karaan safar aan la ilaawi karin oo ku jira Heerka Ganacsiga ugu Fiican Adduunka, oo ay tagaan meelo badan.
"Shabakadeena sii kordheysa, waxaan ku siin karnaa rakaabka ka socda Sheremetyevo isku xidhka aan kala go'a lahayn ee meelaha caanka ah ee Aasiya, Afrika, Bariga Dhexe iyo Ameerika, iyo meelaha ugu sarreeya ee qorraxda sida Maldives, Seychelles iyo Zanzibar iyada oo loo sii marayo 'Garoonka Diyaaradaha ugu Fiican Adduunka 2021', Garoonka Caalamiga ah ee Hamad (HIA)."
Mikhail Vasilenko, Agaasimaha Guud ee JSC Madaarka Caalamiga ah ee Sheremetyevo, ayaa yidhi: “Garoonka Caalamiga ah ee Sheremetyevo si kal iyo laab ah ayaan u soo dhawaynaynaa Qatar Airways, waxaanu si gaar ah u qiimaynaynaa adeegyadda ugu sarreeya iyo soo dhawaynta halyeyga ah ee ay shirkaddu u fidiso macaamiisheeda. Socdaalayaashu waxay hubaal ka heli doonaan jidkan cusub ee Moscow ilaa Doha iyo fursada ay ugu safraan in ka badan 140 goobood oo cajiib ah oo adduunka ah. Dhanka kale, Gegida Caalamiga ah ee Sheremetyevo wuxuu diyaar u yahay inuu siiyo rakaabka Qatar Airways adeegyada ugu casrisan, adeeg heer caalami ah oo ah 5-xiddigle Skytrax, iyo tayada ugu tayada wanaagsan ee daryeelka macaamiisha si looga helo garoomada diyaaradaha ee Yurub ugu weyn.”
Qatar Airways ayaa sii wada dib u dhiska shabakadeeda, taasoo hadda taagan in ka badan 140 goobood. Laga bilaabo Oktoobar 6, Ruushku wuxuu si rasmi ah u galay liiska cagaarka ah ee u socdaalaya Qatar ka dib markii tallaalka Sputnik V ay aqbashay Wasaaradda Caafimaadka Qatar.